Great Odds Casino- Kuze kufike ku-125% Ibhonasi Yokwamukela Efanayo
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-great odds casino
Isibuyekezo se-Great Odds Casino
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Betsoft, Evolution Gaming, Playtech
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ibhonasi Lokukwamukela
Uma uthanda ukugembula, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo kwi-inthanethi. Ungazama ukubheja kwezemidlalo oyithandayo noma udlale i-poker bukhoma noma ibhingo ngokumelene nabanye abadlali. Kukhona nethuba lokuvakashela ikhasino eku-inthanethi futhi udlale amakhulu ama-slots nemidlalo yetafula.
Amawebhusayithi wokugembula amahle kakhulu azama ukumboza zonke lezi zinketho kwiphakeji elilodwa. Imikhiqizo emikhulu efana noWilliam Hill, iMansion, neBet365 ikwenzile. Futhi manje, sinohlobo olusha sha lokugembula online olwenza lokho nje – yiGreatOdds, ikhasino entsha sha ku-inthanethi ne-sportsbook yethulwe ngo-2020.
Imibono emihle iqala cishe ngokushesha lapho uvakashela iwebhusayithi ye-GreatOdds. Azikho izikhangiso ze-spammy ezithatha isikrini sakho. Esikhundleni salokho, uphathwa ngewebhusayithi enhle egqoke ama-accents amhlophe nampunga amnyama e-Ivory.
Ukuhlelwa kufana ncamashi namaphethini abekwe amakhasino emikhiqizo emikhulu nezincwadi zezemidlalo eziku-inthanethi. Lokhu kuyinto enhle ngoba yenza isiza sitholakale kalula futhi sisebenziseke kalula. Yonke into ibekwe ngokusobala nge-zero clutter – impela kuyimpumelelo njengoba le webhusayithi ikunikeza izinketho zokugembula eziningi kunabanye abaningi!
IGreatOdds ngokusobala igxile ekubhejeni kwezemidlalo kepha lokho akusho ukuthi ingxenye yekhasino ayinakwa. Uthola cishe imidlalo engama-200, kufaka phakathi ama-slots, i-roulette, i-blackjack, nezihloko ze-poker. Ngenkathi inombolo ingeyona enkulu kunazo zonke, izinhlobo abanazo ziyahlaba umxhwele.
I-Netent ilapha, kanjalo neBetsoft, Playtech, Pragmatic Play nabanye abambalwa. Kubukeka sengathi opharetha banqume ukuthatha izindawo ezihamba phambili kumthengisi ngamunye bese beshiya ezingezinhle kangako! Uma imidlalo yekhasino yomdlali oyedwa ingakuthandi, i-GreatOdds ineqoqo elisabekayo lamagumbi womdlalo wabathengisi abukhoma, kanye ne-BetGames suite.
Amabhonasi lapho ikhasino entula khona okuncane, ngebhonasi yediphozi eyamukelekile okuwukuphela komnikelo wabadlali. Abathanda ukubhejela ezemidlalo bathola ibhonasi yokukhuthaza, futhi lokho kukhona lapho ekhasini le-promos okwamanje. Kepha njengoba iGreatOdds iyiwebhusayithi entsha sha, asikhathazekile kakhulu. Ngokuqinisekile bazokwengeza okunikezwayo kungekudala.
Manje ake sibheke izici zeGreatOdds ezibaluleke ngempela kubalaleli base-Afrika:
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala Ku-Great Odds Casino
Amakhodi Webhonasi Lokwamukelwa e-Great Odds Casino
Abadlali abasha base-Afrika banokuningi abangakujabulela lapho bevakashela i-GreatOdds casino futhi benze idiphozi yabo yokuqala. Ukuze ukhonze kangcono abadlali abavela emazweni ahlukene, i-GreatOdds ibhonasi yokwamukela ihlukaniswe izingxenye ezintathu ezihlukene:
Kufika ku-125% Ibhonasi Yokwamukela Elinganayo ne Diphozithi Yokuqala
Ibhonasi eyokwamukela ye-GreatOdds inikezwa abadlali ababhalisa futhi benze idiphozi yabo yokuqala ekhasino. Ungafaka isicelo salokhu kunikezwa kunoma isiphi isizwe sase-Afrika, kepha iphesenti lamanani ebhonasi kanye nenani lingahluka ngokuya ngokuthi uhlala kuphi.
Nazi izipesheli ezintathu zebhonasi ezitholakalayo njengengxenye yaleli Phakheji Lokwamukela kwaGreatOdds:
Thola ibhonasi efanayo engu-100% kwidiphozi yokuqala
Isamba semali yebhonasi oyitholayo yi-1000 Kwacha
Thola ibhonasi efanayo engu-125% kwidiphozi yokuqala
Isamba semali yebhonasi oyitholayo yi-500 Cedid
Ibhonasi lapha ingu-125% kudiphozi yokuqala yezakhamizi zakwamanye amazwe
Isamba semali yebhonasi esivunyelwe ngu- $ 100
Ukukhuthaza ama-Sportsbook Wagers
Le bhonasi ye-GreatOdds ibhekiswe ngqo kubantu abavakashela iwebhusayithi yokubheja ezemidlalo. Ungasebenzisa lo mnikelo kuphela ekubhejeni kwezemidlalo, hhayi ekhasino noma esigabeni semidlalo bukhoma. Ukuze usebenzise le bhonasi, kufanele udale ukubheja kwama-accumulator – ukubheja lapho ubheja khona ngaphezu kwento eyodwa. Lokhu kunikezwa kunezici ezilandelayo:
Umfutho wokuwina ungakhuphukela phezulu ku-150%
Udinga ubuncane bokukhethwa okungu-5 ekubhejeni kwakho
Okungenani izingqinamba eziyi-1.20 ziyadingeka okungenani
Uma uthatha ngaphezu kokukhethwa okungu-5, izidingo ezingavumelani ziyancipha
I-GreatOdds Casino ayizange inikeze noma yiluphi uhlobo lwebhonasi yediphozi ngesikhathi sokubuyekezwa. Uma bengashintsha lesi simo ngokuzayo, sizobuyekeza imininingwane lapha ngokushesha.
Iklabhu ye VIP ye-Greatodds
Njengoba i-GreatOdds ingumkhiqizo omusha, basesezinhlelweni zokwakha iqembu elijwayelekile lamakhasimende. Ngesikhathi esifanele, silindele ukuthi ikhasino lembule uhlelo lokuqhekeka lwe-VIP nokwethembeka ukuklomelisa abadlali abanamathela kuwebhusayithi. Ngesikhathi sokubuyekezwa, isayithi alizange lisho noma yiluphi uhlelo lwe-VIP noma lwemiklomelo.
Njengesikhulumi sokugembula esidizayinwe ngobungcweti, i-GreatOdds inenqubo yokubhalisa esheshayo futhi elula. Iqala-kalula kakhulu ngezinyathelo ezilula ezilandelayo:
● Sebenzisa isiphequluli sakho se-intanethi osithandayo ukuvakashela en.greatodds.com
● Thola bese uchofoza inkinobho ewolintshi ethi “Joyina Manje” phezulu ekhasini
● Faka imininingwane elandelayo kwifomu lokubhalisa:
○ Password Iphasiwedi entsha ye-akhawunti yakho yekhasino
○ Number Inombolo yocingo yokuxhumana
○ Ikheli eligcwele
○ Ukuthanda imali
● Qiniseka ukuthi ufaka lonke ulwazi ngokunembile ngoba yonke i-akhawunti iba nenqubo yokuqinisekisa eqinile
● Chofoza ibhokisi elingezansi “Imigomo Nemibandela”
● Chofoza kunkinobho ethi “Dala i-Akhawunti” ezansi kwefomu
● I-akhawunti yakho entsha isilungile manje
● Ungasebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi kunoma iyiphi i-PC noma iselula ukungena ekhasino
● Manje yisikhathi sokungeza imali ethile, ufune amabhonasi ajabulisayo, bese uqala ukuwina!
Ingabe iGreatodds Casino Iyatholakala nakwiSelula?
Yebo, njengekhasino yanamuhla eyethulwe ngo-2020, ungadlala iGreatOdds kunoma iyiphi i-smartphone ekhishwe eminyakeni eyi-3-4 edlule, noma nangaphezulu! I-Android ne-iPhones zombili zisekelwa ngokulinganayo. Futhi uma une-OSes engajwayelekile njengeWindows Phone noma iBlackberry, nazo zingasetshenziswa ukudlala ama-Slots eGreatOdds. Vele uqinisekise ukuthi unokulandelayo:
Isiphequluli seselula se-HTML5 esifana ne-Chrome, Firefox, Safari
Ukuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo, okungcono i-4G noma i-WiFi
Ikhasino isebenzisa ubuchwepheshe be-HTML5 ukusebenzisa iwebhusayithi efanayo kumasistimu wokusebenza ahlukile njenge-iOS ne-Android. Ngenhlanhla, uma unefoni ye-Android, i-GreatOdds inesici esithe xaxa esengeziwe esichaza esigabeni esilandelayo.
Ngingayidawniloda iGreatodds Casino kuselula yami?
Yebo, kodwa kuphela uma unefoni ye-Android. IGreatOdds ithuthukise uhlelo lwayo lokusebenza lomakhalekhukhwini we-Android. Alukho uhlelo lokusebenza lwama-iPhones okwamanje. Ungathola ukulanda uhlelo lokusebenza ngokuchofoza kusixhumanisi esingenhla ekhasini lasekhaya kusayithi leselula. Uma uvakashela ikhasino kwi-PC, lesi sixhumanisi ngeke sibonakale.
Ngemuva kokulanda ifayela le-APK efonini yakho, ungayifaka ngokuthepha kufayela elilandiwe naku- “yebo.” Lolu uhlelo lokusebenza oluphephile noluthembekile olwenziwe yiqembu le-GreatOdds.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwe e-Greatodds Casino:
Wire Transfer Yebo Kuze kube yizinsuku eziyi-7
Visa Yebo Kuze kube yizinsuku eziyi-7
EcoPayz Yebo Izinsuku eziyi-1-3
Skrill Yebo Izinsuku eziyi-1-3
Izindlela Zokubhenka Ezamukelwe e-Great Odds Casino
I-Visa / MasterCard Yebo
Kusungulwe: 2020 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Opherethwa ngu: Bluebell BV I-imeyili: [email protected]
Download Version: Yes Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Yebo
Izinzuzo nezingozi ze-7 Greatodds
● Unebhuku lezemidlalo, ikhasino nokubheja bukhoma
● Ilayisensi eCuracao, eGhana naseZambia
● Yamukela abadlali abavela emazweni amaningi ase-Afrika
● Izikhala ezihamba phambili zevidiyo ezivela kumikhiqizo ephezulu efana neNetent
● Imidlalo eminingi yabathengisi ebukhoma
● Iwebhusayithi esheshayo eku-inthanethi enezici ezinhle kakhulu
● Unohlelo lokusebenza lweselula lwe-Android
● Izindlela zokukhokha eziphephile nezilula
Yini Eyenza I-Greatodds Casino Ukhethe Oludumile Kubadlali Base-Ningizimu Afrika?
Ngokungafani namakhasino amaningi aku-inthanethi asebenza emakethe yase-Afrika, iGreatOdds ayigxile kubadlali baseYurophu noma baseGlobal. Esikhundleni salokho, kugxilwe ku-100% ekunikezeni isipiliyoni esezingeni lomhlaba kubadlali base-Afrika. Lokhu ungakubona kulezi zici ezilandelayo –
Ayikho imikhawulo kubadlali base-Afrika ekubhaliseni (Ngaphandle kweSudan, Libya, Eritrea njll)
Ibhonasi ekhethekile yokwamukela iGhana neZambia
Izimali zasendaweni ezifana neCedi, Kwacha, kanye namaRandi ziyasekelwa
Amasayithi ahlukene wabadlali beGhana neZambia
Kokubili ulimi lwesiNgisi nolwesiFulentshi luyatholakala
Ukukhethwa okumangalisayo kwezindawo ezivela eNetent, Playtech njll
Izikhalazo ze-Greatodds Casino Africa
Le yekhasino ne-sportsbook entsha yethulwe ngo-2020. Kusesekuseni kakhulu ukuthi ungabheka izikhalazo zabadlali ngesikhathi sokubuyekezwa. Basesezinhlelweni zokuqinisa izici zabo zekhasino nezewebhusayithi. Uma bekufanele sikhiphe noma yiziphi izikhalazo njengamanje, bekungaba ngokushoda kwamabhonasi ekhasino, ama-jackpots aqhubekayo, kanye nohlelo lwe-VIP / ukwethembeka. Silindele ukuthi i-GreatOdds yethule lezi zici ngesikhathi esifanele.
Ngingadlala i-GreatOdds Casino kunoma yikuphi e-Afrika?
I-GreatOdds yekhasino ne-sportsbook ivulekele abadlali abavela kulo lonke elase-Afrika, kepha kukhona okumbalwa okuphawulekayo. Banohlu lwezindawo ezivinjelwe, ezibandakanya amazwe alandelayo ase-Afrika – iSudan, iSouth Sudan, i-Eritrea, neLibya. Ngaphandle kwala mazwe, izakhamizi zawo wonke amanye zamukelekile ukuthi zizodlala kule webhusayithi enhle futhi zizuze imali yangempela!
Ingabe iGreatOdds iyikhasino ephephile nelayisensi yabadlali base-Afrika?
Yebo, kakhulu. Eqinisweni, iGreatOdds yikhasino elisha elinikezwe ilayisense ngohulumeni base-Afrika. Lokhu akuvamile kakhulu ebhizinisini lekhasino eliku-inthanethi. Leli sayithi linamalayisense avela kwiziphathimandla zaseGhana naseZambia. Futhi banelayisensi yomhlaba wonke evela kusiphathimandla sokugembula seCuracao. IGreatOdds impela iyikhasino eliphephe kakhulu nelisemthethweni labadlali base-Afrika.
Ingabe i-GreatOdds iyikhasino noma indawo yokubheja ezemidlalo?
Kuyikho kokubili, futhi kuphelele kakhulu kunalokho! Okokuqala, i-GreatOdds iyisayithi yokubheja yezemidlalo – ungabeka ukubheja emidlalweni eminingi yezemidlalo ebukhoma evela emhlabeni wonke. Kepha futhi banekhasi lekhasino elisebenza kahle online eligcwele izikhala ezijabulisayo nemidlalo yamakhadi evela kwabanye bonjiniyela abaphambili begeyimu. Banikela ngemidlalo eminingi yekhasino yomthengisi bukhoma. Lesi yisiza esihle sokugembula lapho ukhululekile khona ukukhetha lokho ofuna ukukujabulela kakhulu!
Ingabe i-GreatOdds Casino inama-jackpots emali enkulu?
Uma ufuna ukunqoba kwe-jackpot yezigidi, asesabi. I-GreatOdds ayinikeli ngemidlalo emikhulu ye-jackpot eqhubekayo ngo-2020. Lesi simo singashintsha esikhathini esizayo njengoba bengeza imidlalo emisha. Sizokugcina uvuselelwa.
Ngiyikhipha kanjani imali kwi-GreatOdds Casino?
Ungakhipha imali kuphela kwikhasino eku-inthanethi lapho uwina imali ngemuva kokubeka ukubhejela emidlalweni nasezindaweni lapho. Lapho usuthole okuwinile esikweletini sakho, kufanele uye ekhasini leCasino leCashier / Banking / Izinkokhelo bese ufaka isicelo sokuhoxa. Yonke inqubo ilula njenge-1-2-3:
Ngena ku-akhawunti yakho kusuka PC noma mobile
Bheka i-akhawunti yakho bese uqinisekisa ukuthi kunemali esele efanelekile
Uma unebhonasi, qiniseka ukuthi isetshenziswe ngokuphelele
Futhi, hlola ukubona ukuthi imigomo yokubheja yebhonasi iphelele yini
Uma usenelisekile, sekuyisikhathi sokufaka leso sicelo sokuhoxa
Iya ekhasini le-Cashier / Banking lekhasino bese ukhetha “ukuhoxa”
Manje usungafaka inani ofuna ukulikhipha
Bese ukhetha inketho yokukhokha oyithandayo ukuze uqedele isicelo
Ikhasino ngeke lithathe isikhathi esithile (kufika emahoreni angama-48) ukwenza ukuhlolwa kokuphepha futhi liqinisekise yonke imininingwane. Bangacela amakhophi e-ID yakho siqu nobufakazi bekheli njengezinyathelo zokuphepha ezisemthethweni. Uma usubanikile lokhu, bazoqinisekisa bese bethumela imali kwi-akhawunti yakho.
Ngubani ophethe i-GREATODDS Casino?
I-GreatOdds Casino ne-Sportsbook iphethwe futhi iqhutshwa iqembu elibizwa ngeBluebell BV. Le opharetha yokugembula esekwe eCuracao inezindawo eziningana ezethembekile zokubheja nezamakhasino kukhathalogi yazo. Bayibhizinisi langempela futhi elisemthethweni elinerekhodi elihle lomkhondo.
Ngabe i-Greatodds Casino Inezici Zokubheja Ezemidlalo?
Yebo, empeleni, i-GreatOdds empeleni iyiwebhusayithi yezemidlalo enezici zekhasino! Isici sokubheja kwezemidlalo ukuheha izinkanyezi, ngekhasino engeza izici eziningi ezengeziwe ukuze kuzuze abadlali.
Iphephe kangakanani i-GreatOdds Casino?
Sizokala i-GreatOdds njengekhasino eliphephe ngokweqile, yize isencane. Sinezizathu zokwenza kanjalo-
Leli sayithi linamalayisense eCuracao, eGhana naseZambia – njengoba lesi yisayithi eligxile e-Afrika, lesi yisici esibaluleke kakhulu.
I-opharetha inolwazi futhi iyaziwa kakhulu ezimakethe zokubheja eziku-inthanethi.
Imidlalo yekhasino ivela emikhiqizweni ehamba phambili efana neNetent.
Banikela ngokusobala okugcwele ngemigomo futhi banokusekelwa okuhle kwamakhasimende.
Uthola abahlinzeki benkokhelo abaphephe kakhulu nabadumile.